Nezve Isu - Guangdong Arcair Appliance Co., Ltd.
Kwemakore anopfuura gumi nemashanu, vane masheya eARCAIR vari kushanda muCooker Hood Research uye Basa rine chekuita neBudiriro, muna 2011, ARCAIR yakavambwa zviri pamutemo nechinangwa chekugadzira cooker hood iyo ART yeAIRVENTILATION, yakanangana nekushandira vatengi pasi rese neInnovation Quality Patent zvigadzirwa. Pamwe chete neCo Design shamwari kubva kuItari (MI) Bollate, ARCAIR inoramba ichiparura zvigadzirwa kune mutengi wedu wekudyidzana, panguva imwe chete, ARCAIR yakasungirirwa neGerman Lab (Applitest) kuita bvunzo yehupenyu hwese kuti ive nechokwadi chekuti zvigadzirwa zvese zviri mukuchengetedzwa kwazvino. chinodikanwa kupasi rose.
Kuronga pakati pe TOP No. 5 cooker hood exporter, ARCAIR ramba uchiisa mari muR & D uye Automation production Iine, nerubatsiro rweRobhoti Polishing, Robot Welding, Robot Motor Housing Assembly, zvigadzirwa zvedu zvakakwirira zvinogutsikana nevatengi vedu. Mukutanga kwa2019, ARCAIR yakatanga iyo PATENT PLASMA system kumusika kuitira kuti ipe mhinduro yakanaka yeKitchen Ordor uye Kuvandudza Kitchen Indoor AIR mhando.
Kusvika ikozvino, ARCAIR inowana makumi mapfumbamwe neshanu pasirese Patents uye isu tinoramba tichiita zvakawanda, mu2018, Laboratory yedu nyowani yakasimbiswa neDEKRA iri mukushandisa zvizere kutibatsira kuita zvimwe zvemhando yepamusoro zvigadzirwa, ikozvino huwandu hwekugadzira huwandu hwave 800000 pcs / gore.
Arcair inogara iine hanya nezvezvinodiwa nemutengi uye kugutsikana
Arcair iri kuramba ichiisa mari mukuvandudza pane zvigadzirwa zvedu
Arcair inogara ichivavarira kupa zvigadzirwa zvedu nekukosha kwakawanda kune vatengi vedu
2011 Kambani Yakagadzirwa
2013 ERP System Launch
Wedzera Mutsetse Wekugadzira kusvika ku4
2014 New Factory Building iri kushandiswa
Yekutanga 4D Polishing Marchine iri kushandiswa
2015 Digital Bancing Testing Machine
Motor imba screwing Robhoti iri kushandiswa
Robhoti Welding Line
PLM system iri kushandiswa
2019 Induction Hob Production Line iri kushandiswa
Hardware Workshop otomatiki mari
2020 Yakanyorwa paNew OTC Market
Security kodhi: 873405